Nhau - Yekuwedzera mutsetse wePA 6.6 base polymer inotanga muShanghai
US nylon hofori Invista (Wichita, Kansas; www.invista.com) yakati yawedzera simba rayo repolyamide 6.6 base polymer muShanghai Chemical Industry Park (SCIP) ne40,000 t / y. Iyo yekuwedzera tambo yatanga mashandiro uye inounza huwandu hwakazara panzvimbo iyi kusvika 190,000 t / y, makumi matatu emazana ayo akaiswa autoclaved nepo mamwe ese ari kuenderera kugadzirwa. Mumakore mashoma apfuura, iyo yekupedzisira kunyanya yakawedzerwa.
Sekureva kwaDistista's director director Angela Dou, iyo kambani yeUS iri kuita kune iyo inotarisirwa kuwedzera mukuwandisa kudiwa. Kufungidzira kwemukati kunoona kunyorera kwakadai sedzemotokari, R&D, kuvaka kureruka uye otomatiki semasimba makuru ekufambisa.
Kusvika ikozvino, Invista anga achigadzira iyo yepakati hexamethylenediamine (HMD) muShanghai, kuwedzera paPA 6.6. Kubva pakati pa2020, kambani iyi yanga ichigadzirawo chirimwa cheiyo yepakati chigadzirwa ADN (ona Plasteurope.com ye25.06.2020). Kugadzira kwakarongerwa kutanga muna 2022 nekwanisi ye400,000 t / y.
Post nguva: Dec-25-2020